Home Wararka Doollar Been Abuur ah oo la soo geliyay Muqdisho si loogu...
[DIGNIIN] Doollar Been Abuur ah oo la soo geliyay Muqdisho si loogu iibsado codadka Xildhibaanada
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo la hadashay MOL ayaa sheegaya in magaalada Muqdisho lasoo geliyay lacago dollar been abuur ah, taasoo la rabo in loo adeegsado ololaha doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay oo qaarkood la shaqeeya musharaxiinta madaxweyne ayaa MOL u sheegay in xogta lacagta dollar-ka been abuurka laga helayo ilo amni oo u sheegay in loo adeegsan rabo xildhibaanada laaluushka qaadanaya.
MOL oo arrintaan dabagal ku sameysay ayaa ogaatay mid ka mid ah murashaxiinta madaxweynaha uu u adeegsan doono xildhibaanada codkooda iibsanaaya inuu ku khaarijiyo si codka ugu helo.
Si kastaba, ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa MOL u sheegay in rajo badan uusan lahayn Kheyre, ayada oo la qiyaasay inuu heli karo 20-25 xildhibaan wareeggan koowaad ee doorashada.
Previous articleCabdi Siciid Muuse oo Kala Tuurid ku wada W. Ariimaha Dibadda.
Next article[Deg Deg] Xildhibaanadii Ceel Waaq oo loo aqoonsaday in ay yihiin kuwa sharciga ah
RW Khayre oo ku wajahan Magalada Dhuusamareeb